Horudhac: Real Madrid vs Espanyol… (Los Blancos oo indhaha ku haysa inay gaarto guusheedii afaraad oo xiriir ah horyaalka La Liga) – Gool FM
(Madrid) 07 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa indhaha ku haysa inay gaarto guusheedii afaraad oo xiriir ah kulammada horyaalka La Liga, marka ay galabta oo Axad ah garoonkeeda Bernabeu ku soo dhoweynayso naadiga Espanyol.
Los Blancos ayaa haatan fadhisa kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka La Liga, waxaana ay dhibcaha la wadaagtaa kooxda xafidanaysa horyaalka ee Barcelona, halka Espanyol ay ku jirto saddexda kaalin ee looga laabto horyaalka kaddib markii ay natiijooyin liista la timid bilihii ugu horreeyay kulammada horyaalka Spain kal ciyaareedkan.
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 03:00 Galabnimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha: Santiago Jaime Latre (Spain)
Kooxda Real Madrid ciyaaryahankeeda daafaca Marcelo ayaa garoomada uga maqnaan doona dhaawac muruqa ah, waxaana kooxda marti-gelinaysa kulanka ay eegeysaa inay garabka bidix ee daafaca ku soo bilowdo Ferland Mendy.
Federico Valverde ayaa heli kara fursad kale oo uu ugu soo bilowdo booska khadka dhexe ee Los Blancos kaddib bandhig cajiib ah oo uu sameeyey.
Rodrygo iyo Isco ayay u badan tahay inay ka soo muuqan doonaan weerarka kaddib dhaawacyada Lucas Vazquez, Eden Hazard iyo Gareth Bale.
Dhinaca kale kooxda Espanyol, Victor Sanchez ayaa dhaawac ku seegaya kulankan, waxaana uu ka maqnaan doonaa kooxda martida ah.
Esteban Granero ayaa la filayaa inuu ku soo bilaaban doono booska khadka dhexe kulanka ay ka horjeedaan kooxdiisii hore.
Pipa iyo Victor Gomez ayaa ku tartami doona xiddigii ku soo bilaaban lahaa booska garabka midig ee daafaca kooxda Espanyol kulankan.
>- Kooxda Real Madrid ayaa guuleystay 13 ka mid ah 14-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday naadiga Espanyol tartammada oo dhan.
>- Real Madrid ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda kula ciyaartay kooxda Espanyol tartammada oo dhan.4
>- Los Blancos ayaa guuleysatay labadaba qeybta hore iyo ciyaarta oo dhammaystiran shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Espanyol dhammaan tartammada.
>- Real Madrid ayaa guuleysatay shank a mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay kulammada horyaalka La Liga.
>- Kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Real Madrid ayaa dhalinaysay ugu yaraan labo gool shan ka mid ah lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku dheeshay garoonkeeda kulammada horyaalka La Liga.
>- Naadiga Espanyol ayaa ku guuldarreysatay inay guul gaarto 10 ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka La Liga.